Naftaa igu kaa qasbeysee, uma qalantid Caashaqa! (Qaybti ugu danbaysay) Qalinkii : Adan Jama Kahin | Saraarnews
Naftaa igu kaa qasbeysee, uma qalantid Caashaqa! (Qaybti ugu danbaysay) Qalinkii : Adan Jama Kahin
Intaanan sheekadan dhamaadkiisa idin soo gudbin, waxan jeclaanlaha inan marka hore halkan aan uga mahad naqo qaybihi warbaahinta ee sida joogtada ah marwalba dadweyne ugu soo gudbinaayay sheekadan taxanaha ahayd, kuwaasoo ay ka mid yihin Jaraaiidka iyo websaadyada kala ah Wargeyska Saxafi, Saraarnews, OOdweynews iyo Somalidiaspora. Waxan isna si gaar ah ugu mahadinaya Madaxa Wargeyska maalinlaha ah Saxafi oo ka soo baxa magalada Hargeysa Mr. Abdi Fatah Mohamed Aidid oo dhawr jeer ila soo xidhiidhay isaga oo iga codsanayay marwalba inan qaybta kale u soo gudbiyo sababtuna waxay ahayd iyadoo dadbadan oo reer Hargiesa ay marwalba soo codsanjireen sheekada qayba heeda kala duwan.
Markuu uu Cabdala inantii (gabdhii) sii dhaweeyay, ayuu dib ugu soo noqday jidkii weyne, markaasu cabaar isktaagay wadada agteedi si uu Taksi uga raaco, markuu ila 10 daqiiqa taagna meeshi ayaa Taksi soo maray, markaasu Cabdale gacanta u taagay si uu isu taago. Markuu Taksigii istaagay ayuu u sheegay xaafadiisi si uu u geeyo. Markuu Taksigii raacay ayay ninkii drawalka (shufeerka) ahaa dhex ku sheekaysteen markii uu u sheegay magaciisa ayuu yidhi laba wiig ka hor ayaan galay ruwaayad ay kooxda la magac baxday “Kooxda Maaweelinta Banadir” ay dhigayan, ruwaayada wuxu u sheegay inuu Cabdala Nuradin wax ka metelaayay, markaasu ku yidhi ninyahaw ma waxa jira 2 nin oo la yidha Cabdala Nuradin , mid wariye ah iyo mid jilaa ah. Markaasu Cabdala ugu jawaab maaha laba nin ee wuxuba waa aniga. Horta anigu waxan u shaqeeya Radio Muqdisho, isla markaana ruwaayadaha Banadiriga ahna waxbaan ka metela walibana hal abuure ayaan ahay.
Markay ila 25 daqiiqo sii socdeen ayuu Cabdala Taksigi u sheegay meeshu ku degaayo, markuu Cabdala degay ayuu Taksigii is yidhi lacag sii, markaasu ninkii Taksiga waday ku yidhi may iskada Cabdala waxba ha bixin lacag e kolayba gurigaygaan markii horeba u socday. Cabdala ku yidhi Taksiilihi waad mahadsantahay. Cabdale markaa gurigiisa oon sida uga fogayn meesha uu kaga degay Taksiga ayuu u lugeeyay.
Markuu gurigii galay ayuu cabaar ku yara nastay makhsinkii (qolkii) fadhiga, wuxu markiiba samaystay koob shah iyo waxooga casho ah, markii uu casheeyay saacadiina ay ila 10 habeenimo ku sii dhawdahay, ayuu isu diyaariyay inuu seexdo. Markuu ku seexday sariirta uu jiifay ayay hurdadii hore uga iman wayday, sababtuna waxay tahay Cabdale wuxu aad uga fekeraya hawshii doonista inanta (gabadha), raggii isaga raaci laha , waayo Cabdale reerkoodu Jigjiga ayay degen yihin oo halkan walaashii oo keliya ayaa degan. Marka wuxu ka welwelsanyahay in lagu yidha noo keen reerkiini. Mida kale arrinta inanta (gabadha) ah ee doonista oo isaga ku ah degdeg waayo wax uu hore ugu sii diyaargaroobay may ahayn. Waxa kaloo uu aad uga fekeray meeshu kharash ka keeni laha inlayn lacag hadda meel u taala majirto e , mushahaaradiina wali lama qaadan.
Sidii u fekeraayay ayay saacadii 4tii subaxnimo gaadhay markaasay in yar hurda ah ka timi, saacadu markay ahayd 6:30 ayuu jareskii saacadu dhawaaqay. Wakhtigaasoo ah saacadii uu Cabdala ugu diyaargaroobi jiray waqtigii uu tagi laha shaqada . Adigu ila rubux saac kadib ayuu hurdadii ka kacay , markaasu waysaystay salaadi subaxna qaleeyay, kadib ayuu cadayday oo quraac diyaarsaday, markii uu quraacday kadibna dharkii buu gashaday si uu u shaqa tago. Wax yar kadib shaqadii buu tagay.
Markii uu Cabdale shaqadii ka soo baxay wuxu markiiba u tegay niman ay saaxibo ahaayeen kuwaaso dukaamo ku laha suuqa Xamarweyne, arrinta degdeg ahayd ee doonista ayuu uga sheekeeyay , markaa wuxu waydiistay lacag dayna uu hawsha ku soo dhameyo, way aqbaleen oo waliba waxay yidhaahdeen maalintaana nasoo wargeli waanu ku raaci si aan hawshu u soo dhamayno, wuuna ka aqbalay sidaasaanu ugu mahadnaqay.
Cabdale nin bulshaawi ayuu ahaa markaa ila afar oday oo ay isku fiicanyhiin iyo niman saaxiibadiisa oo ay ku jiraan kuwii hore uu uga balanqaaday inay raacayan, ayuu isku habeeyay, waxanu wargeliyay inay jimcahan 4 galabnimo ay doonistii ka dhici doonto gurigooda gabadha. Maalintii ku xigtayna inantii ayuu u sheegay inay reerkooda u sheegto maalinta Jimcaha ee doonista. Waxa la gaadhay maalinti Jimcihii Cabdal iyo odoyaashii iyo ragii saaxiibadii ahaa intay Takaasi soo qaateen ayay waqtigii balanta guriga inanta (gabadha) yimaadeen. Marka inanta Abaheed , Adeerkeed iyo odayaal ka socda xagooda ayaa markiiba ku qaabilay meeshi.
Way wada fadhiisteen dhaman kaftan yar kadib hawshii wax waydiiska ayaa bilaabatay markaa odayaashii waxay inanta (gabadha) aabaheed way diisteen inantii inuu siiyo iyagoo dariiqi loo mari jiray u maray , waxanay ka balanqaadeen ila 2 ama 3 bilood kadib in ay meherka iyo arooskaba marqudha israacin doonan inta ka horeysana wuu soo diyaar garoobi doona. Reerkiini inanta dhalay sidii arrinkii doonista inanta ku aqbaleen. Sidii baana Cabdala inantii loogu hibeeyay.
Marka kadib Cabdele Xaafada inanta (gabadha) toos buu u iman jiray wiigiiba laba jeer, markuu reerka salaamana inanta (gabadha) makhsinkeeda (qolkeeda) ayuu u dhaafi jiray halkaas inanta ku sheekaysan jireen mar marna bananka ayay u wada bixi jireen si ay Hudheelada uga soo casheeyaan. Sidaasay arrimuhu ku socdeen ilaa adigu bil iyo badh in ku dhaw.
Waxa dhacday in Cabdala iyo nin ay saaxiiba yihiin ay iskhilaafeen beryahaa, saaxiibkii oo ku jiray maalintii hore raggii ka qaybqaatay doonista inanta. Ayaa intuu cadhooday ku yidhi Cabdala waad ka qoomamayn waxan ku geysto, markaasu meel Kafee ay fadhiyeen buu ka kacay. Cabdala waxba arrintii uma qaadane gurigiisii ayuu iska qabtay.
Habeenkii ku xigayba, ninkii ayaa reerkii inanta u tagay markaasa la soo dhaweeyay markuu cabaar fadhiyay uu shah cabay ayuu ku yidhi reerkii, anigu manta ergo baan idinku imi taasoo ah waxan fariin ka wada maanta Cabdala Nuradiin. Fariintu waxay tahay anoo ka xun wuxu isoo faray inuu arrinti inanta (gabadhi) u doonanayd uu ka noqday, run ahaanti waa fal lagu xumaade eh reraw raali ahaada.. Markuu sida yidhi reerkii oo dhan baan naxay , shucuurta dadkuna way isbedeshay. Wax yar kadib ninkii Cabdala saaxiibkii ahaa ayaa iska baxay.
Habeenkii odhan reerkii aad bay arrinta uga xumaadeen, waxanay ku abuurtay walaac iyo walbahaar. Qofwaliba wuxu iswaydiinaya talaw maxay inanteenu (gabdheenu) ku samaysay ninka. Inantii intay naxday ayay makhsinkeedi (qolkeedi) gashay iyadoo habeenka oo dhan marna ooynaysay marna fekeraysa siday xaaladeedu sida u ahayd ayay goor danbe iska seexatay.
Hadaba waxa hore u jirtay muda ka hor mar uu ninkii sarkaalka ahaa inanta (gabdadha) Abaheed la soo qaaday arrin xaga inanta ah, markaasu uu ku yidhi Abaheed ninka waar inantani ninkalay doonayse ee raali ahaw. Markii arrintan reerka ku dhacday markiiba ninkii ayay la xidhiidheen markii uu u yimi waxay ku yidhaahdeen, waadigii barigii inanta doonayay ee imika soo diyaar garaw waxba isbedeleye. Markii ay arrintii uga sheekeeyen siday u dhacday wuxu yidhi waar awalba kaas inuu ciyaala suuq aha waan garanayay ee ha isku wareerinina. Dabdeedna Abaheed ba ku yidhi waan ku siiyay inantii bi shardi, mudda gaaban ku soo diyaar garaw oo meherka iyo arrooskaba israaci mar qudha , wuxu ku jawaabay marxaba hadaba waan kaa gudoomay ee aan soo diyaar garoowo.
Laba wig kadib iyadoo ay tahay haben Jimcaha ah ilaa, 7dii fiidnimo ayuu Cabdala guriga inanta (gabadha) yimi isagoon waxba la socon, si uu u soo booqdo reerka, markii uu reerkii salaamay salaanti si fiican loogama qaadin. Dabadeedna isagoo yaaban buu galay qolkii (makhsinkii) inanta u dhaafay wuxu ku yidhi Abaayo caawa maxa reerka ku dhacay ma geeriba idin soo gashay markaasay tidhi mayee waxanad adigu dhiginba ma dhicin. Wuxu ku yidhi Abaayo side wax u jiraan anigu waxba lama socde , waxay tidhi saw maad noo soo dirin nin ka mid ah raggii ergada ahaa ee habeenkii doonista kula socday, kaasoo aad ku tidhi reerkii inanta (gabadha) u tag oo waxad u sheegta in anigoo oo Cabdala Nuradin ah aan inanti (gabadhi) ka noqday.
Markay intaa inantu (gadadhu) ku tidhi isaga , markiiba wuu naxay Cabdale hadalna kamuu soo bixin , ilma ka qulqulaysay indhihiisa farabadan. Markay inantii aragtay siduu u ilmaynaayo Cabdale ayay garatay markiiba in Cabdala been laga sameyay markaasay isku dhegeen.
Wuxu wax yar kadib Cabdala u sheegay siday wax u dhaceen iyo in ninkan ay iskhilaafeen, dabadeedna uu arrintii guurkooda sidaa ugu been abuurtay. Waxay ku tidhi waxba maaha ee ana reerka u sheegaya adigu iska hoyo caawa, wuxu ku yidhi gacaliso macasalama ee hawshu adigu sii dhamee.
Galabtii markuu Abaheeda shaqada ka yimi ayuu ku yidhi inantiisi muxu ninkii ku xumeeyay guriga ka soo doonay xalay miyaanu qofku damiir lahayn. Waxay uga sheekaysay Abaheed iyo Hooyadedba siday wax u dhaceen iyo in ninka u yimi reerka u ka been abuuray Cabdale sidaana ay arrintu u dhacday. Reerkii intay cabaar amusen ayuu Abaheed ku yidhi , walaahi nin dadkiisi sida uga soo horjeedaan khayr malaha, ninkan wuxu ka mid ah raggii ergadaha ee inooyimi, wuxuna u ekaa degen oo hadalkiisu miisaanleeyahay, umalayn maayo wuxu Cabdala ku doodaayo inay wax ka jiraan, horena anigu arrinkan waan uga shakisana oo nin guur dib iigu dhiga leh wuxu u jeedo maan fahmin. Imikana ha isku wareerina ninkaa sheekadiisa halkaasay ku dhamaatay ee inaga xidha, oo Aabo gabadhaydiiyay ninkale ayaan imika ku siiyay ee sida ula soco, markay ooyday wuxu ku yidhi ha ooyin adaan ku caawinayaa.
Markay intaasi dhacday inanti (gabadhi) qolkeedi ayay gashay iyadoo murugaysan ooyaysana, hooyadeed ba markiiba ka soo daba gashay oo waxay ku tidhy hooyo iska aamu Aabo arrintu si xun bay u dhacday, Aabana imika rag odayaala oo kale ayuu balan ka qaaday inuu adiga sarkaalka ku siiyay marka meel laga noqda lama joogo. Markaa iska calool adeeg khaladka waxa iska leh Cabdale raggi la socoday waxanu Cabdala ku doodayo cidina ka aqbali mayso waxa la odhanaya waa sheeko ciyaal . Inantii habeenkii sidii bay ku seexatay arrintiina waxay u eegtay wax aan xal lahayn waayo hooyadeed iyo Abaheedba arrinka way isku raaceen.
Markay in badan fekertay waxay la noqotay inay kala doorato waxay waalidkeed ku leeyihin iyo Cabdala oo ay u arkayso nin arrintiisu aanay degenayn waayo guurki dibuu u dhigay , hadana oday ka mid ah raggii ergada ahaa ayaa reerkii u tagay oo ku yidhi inantiina cabdala wuu ka noqday. Waxay u aragtay inanay arrintu xal lahayn. Inkasto ay aad u jeceshahay Cabdala hadana arrinkiisa is burinaaya, reerkeedana kama hor iman karto. Maalintii ku xigtay ayay hooyadeed ku tidhi hooyo Aabo raggii ba dhawaan u imanaya ee sida ula soco. Markay aragtay arrintu halkay ka tagantahay reerkooda ayay tidhi waan aqbalay arrinkiina Cabdala waan fasaxaya.
Habeen kadib ayuu Cabdala gurigii yimi, isago ka rajaynaya in gabadhu ay arrintii khaladka ahaa ee odaygii sameyay inay ka dhaadhicisay reerkooda oo halkoodi jacaylki ka wataan. Nasiib darro marku inantii arrinti ka waraystay waxay ku tidhi ninyahaw arrintii waa la iga gar helay oo marna adiga guurka dib u dhigay, markii labaadna odaygii ahaa ergada ayaa arrintii guurkeena ka noqday isago ku doodaya inaad adigu soo fartay fariinta. Marka arrinku waa arrin jilicsan reerkiina way iga diideen Abahayna nin sarkaala ayuu isiiyay markii aad I fasaxday ee ninyahaw raali ahaw waxan kuu qaban karaa majiraan. Wuxu isku dayay inuu isdifaaco oo uu ka dhaadhiciyo inanu isagu waxan dhacay shaqo ku lahayn nasiib daro kumay qancin. Sidii ayuu Cabdala gurigii kaga soo baxay isagoo muraala dilaaca oo niyad jabsan. Waxanu isku qanciyay si uu arrinta u ilaawo ” Naftaa igu kaa qasbeysee, uma qalintid Caashaqa” taaso markii danbe noqotay hees caana uu ka alifay dhacdada ku dhacday Cabdala Nuradin, heestaasu uu qaado isla markaana laxamiyay Fanaanka Cumar Shooli. Sidaasaanay sheekadi ku dhamaatay………..
SOMALILAND AND THE SAINTS OF KULMIYE BY Jama Dhoofaa